ARB & MIUI : PART – II – Xiaomi Guide
အခုလောလောဆယ် သည်စာကိုရေးနေချိန်ထိ ( ၁၄-၁၂-၂၀၁၈ ) Xiaomi မှာ ARB ပါနေတဲ့ ဖုန်း Model တွေကို လေ့လာမိတာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သည်နေရာမှာ anti :4လို့ဖြစ်တဲ့ဟာက ARB Protection ပါနေပြီ။ Downgrade ဆင်းမရဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားချက်အရတွေ့ရှိမိတာကို ပြထားတာပါ။ အောက်ပိုင်းမှာ fastboot rom တွေနဲ့ anti ပတ်သက်မှုလေးတွေကို လေ့လာကြည့်ရင် anti value တွေရဲ့သဘာဝကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Mi 6x ( Wayne )
Redmi Note5( Whyred )
Mi Max3( Nitrogen )
ကွင်းလေးထဲမှာ ရေးထားတာတွေကတော့ သက်ဆိုင်ရာ Xiaomi ဖုန်းအသီးသီးရဲ့ codename လေးတွေပါ။ ကိုယ့်ဖုန်း model အတွက် codename ကိုသိထားရင် ကွန်ပျူတာနဲ့ fastboot rom တွေကို ဒေါင်းရာမှာ ရှာဖွေရတာ လွယ်ကူစေပါမယ်။ fastboot rom filename တွေရဲ့ ရှေ့ဆုံးမှာ codename ပါတော့ အဲဒါကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်ဒေါင်းတာ rom မှန်ရဲ့လားဆိုတာကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ Xiaomi ဖုန်းအသီးသီးရဲ့ codename လေးတွေကို ယှဉ်တွဲဖော်ပြထားတဲ့ post လေးတစ်ခု သည် Blog ထဲမှာ သတ်သတ်ရေးပေးထားတယ်။
သည်ဟာတွေကို arb ထည့်ထားတာ ကျနော်တွေးမြင်ကြည့်မိတာကတော့ Mi 8 ကတော့ Xiaomi အတွက် တန်းမြင့်ဖုန်းတစ်လုံးပေါ့။ China version, Global version တွေ သတ်သတ်ထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ အလွယ်တကူ China to Global fake မလုပ်နိုင်အောင် လုပ်ထားတာလို့ မြင်မိတာပဲ။ နောက်တစ်ခုက အခုလို အစတည်းက original china rom နဲ့လာတဲ့ China version device တွေမှာ Boot Loader Unlock လုပ်ပြီး Global rom ထွက်တဲ့ model တွေအတွက် Global rom ကိုချိန်းတင်ခွင့်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တင်ပြီးရင် Boot Loader Lock ပြန်လုပ်လို့မရပါ။ လုပ်ရင် Boot loop ဖြစ်ပါတယ်။ Mi 8 တွေမှာ အဲသည်အထာစတာပါပဲ။ ဖြေရှင်းတာကတော့ အဲလို ဖုန်းမတက်တော့ချိန် fastboot mode ထဲဝင်ပြီး Boot Loader Unlock tool နဲ့ BLU ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ရင် ဖုန်းက Boot Loader Unlock ပြန်ဖြစ်သွားပြီး အဆင်ပြေပြေ boot တက်လာပါတယ်။ Model အသစ်များ Global rom ထွက်လို့ပြောင်းတင်ချင်လဲ BLU လုပ်ပြီး တင်ပေါ့။ Boot Loader Lock တော့ ပြန်မလုပ်နဲ့ပေါ့။ Mi Flash Tool နဲ့ရေးတဲ့အချိန် သူက Clean and Lock ဆိုတာကို Default ရွေးထားပါတယ်။ ဒါက ROM တင်မယ်။ Boot Loader ကို Lock လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာပါ။ ဒါဆိုရင် သည်လို device တွေမှာ အဆင်မပြေပါဘူး။ သည်တော့ Mi Flash Tool options ထဲမှာ Clean All ဆိုတာကို မိမိဖာသာ သေချာပြန်ရွေးပေးထားပြီးတင်ပေါ့….။ ဘာပဲပြောပြော Redmi Note 5A ကနေစပြီး BLU မလုပ်ပဲ EDL ကနေ Global rom တင်တာ၊ XiaomiTool နဲ့တင်တာတွေ မရတော့တာဖြစ်လာတာဆိုတော့ အဲဒါနဲ့နောက်ပိုင်းလေးတွေ သည်အချက်လေးကိုလဲ သတိထားပေးပေါ့။
Mi 6x နဲ့ Redmi6Pro ကို မြင်မိတာတော့ Mi A2, Mi A2 Lite ဆိုပြီး fake မလုပ်အောင် တားချင်တာလို့မြင်မိပါတယ်။ သူတို့တွေက Hardware specification တူတယ်လေ။ Redmi Note5ကတော့ Redmi Note series ထဲမှာ သေသေချာချာ ပွဲတွေစီစဉ်ပြီး launch လုပ်၊ India အတွက် Redmi Note5Pro ဆိုပြီးထုတ်၊ အခြားသော China, Global သတ်သတ်တွေ သေချာစီစဉ်ထုတ်တော့ Fake တွေ မဖြစ်အောင် တားချင်မှာပေါ့။ ARB စပါတာ အဲသည် Model က စတာပါပဲ။ ကျန်တာတွေက နောက်မှဖြစ်လာတာပါ။ Mi Max3ကတော့ အဘယ်သို့သော ရည်ရွယ်ချက်လဲဆိုတာ မသိပါဘူးခင်ဗျာ…. 😀 😀 ဘာပဲပြောပြော Xiaomi အတွက် ARB ဆိုတဲ့ စံနစ်တစ်ခုကို ထည့်တယ်ပေါ့။ Mi Mix 2S တွေလဲ Stable rom တွေမှာ Android Pie version ရနေပြီဆိုတော့ ပါလာပြီလား၊ မထည့်သေးဘူးလား ဆိုတာတော့ ကျနော်သတိမထားမိသေးပါ။ သုံးနေသူတွေ စစ်ကြည့်ပေါ့။
ကိုယ့်ဖုန်းမှာ ARB ပါနေပြီလားဆိုတာမျိုးကို fastboot getvar anti ဆိုတဲ့ command နဲ့စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲသည်အခါ boot loader ကနေ anti နံပါတ်ကို report လုပ်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ anti :4လို့ပြနေပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဖုန်းမှာ ARB Protection ပါနေပြီလို့ မှတ်ယူပါ။ ဒါဆိုရင် ROM တွေချိန်းတာ၊ MIUI Version တွေ Downgrade လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာ သတိထားသင့်ပြီလို့ မှတ်ယူနိုင်ပါပြီ။
ဖုန်းကို Power ပိတ်။ Vol Down + Power Keys ကို ကြာကြာလေးနှိပ်ပေးထားရင် fastboot mode ကိုရောက်ပါမယ်။ အဲသည်အခါ ကွန်ပျူတာမှာချိတ်ပြီး အောက်ပါပုံလေးထဲကအတိုင်း command ရိုက်ပြီး စစ်ကြည့်လိုက်ရင် ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
Fastboot roms & Anti Index
ကိုယ့်ဖုန်းမှာ arb ပါလား မပါလားဆိုတာ ကိုယ်တင်မယ့် MIUI Version ရဲ့ fastboot rom ကို ဖြည်ပြီး ရလာတဲ့ rom folder ထဲက flash_all.bat ဆိုတဲ့ file လေးကို Text Editor တစ်ခုခုနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် အလွယ်သိနိုင်ပါတယ်။ fastboot rom ဆိုတာတွေက ဖုန်းကို error ကင်းကင်း clean ဖြစ်ချင်လို့ ကွန်ပျူတာနဲ့တင်လေ့ရှိသူတွေအကြိုက် rom တွေပါပဲ။ ကျနော့်အနေနဲ့ဆိုလဲ ဘယ် ROM အမျိုးအစား၊ ဘယ် MIUI version ပဲဖြစ်ဖြစ် တင်ချင်ရင် ကွန်ပျူတာနဲ့သာ တင်လေ့ရှိပါတယ်။ တင်ရင်လဲ Mi Flash Tool တွေ ဘာတွေသုံးမနေတော့ပဲ flash_all.bat ကို အနည်းငယ်ပြင်ပြီးတင်တာမျိုးလုပ်တော့ သည် file ကိုပဲဖွင့်ဖွင့်နေရတော့ arb ပါလာတဲ့အခါမျိုးမှာ ဖိုင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတင်ကိုပဲ တင်လိုက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်ပြီဆိုတာ တစ်ခါတည်းမှန်းမိနိုင်ပါပြီ။ Mi Flash tool သုံးဖို့က Dot NET Framework 3.5 ကို ကိုယ့် Windows မှာထည့်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်။ သူကလဲ Windows 8 ကတည်းက ပါမလာတော့လို့ သတ်သတ်ထပ်ထည့်တာတွေလုပ်ရပါတယ်။ အဲဒါအလုပ်ရှုပ်လို့ Flash tool သိပ်မသုံးဖြစ်ခြင်းပါ။ flash_all.bat ကို manual ပြင်တင်နည်း သည် blog ထဲမှာရေးပေးထားတာရှိပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး ARB နဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့၊ စပါခဲ့တဲ့ Redmi Note5ရဲ့ fastboot rom လေးနဲ့လေ့လာကြည့်ပါမယ်။ MIUI 10 Global Stable rom ပါ။ ARB ပါတဲ့ဖုန်းတွေရဲ့ fastboot rom တွေမှာ လက်ရှိတင်မယ့် rom က arb anti နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာ တစ်ခါတည်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အောက်ကပုံလေးကို လေ့လာကြည့်ပါ။ အပေါ်ဆုံးနှစ်ကြောင်းက Redmi Note5ဖုန်း ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ စစ်တာပါ။ သူ့ codename whyred ဆိုတာမဟုတ်ရင် ဆက်မတင်ပါဘူး။ exit ဆိုပြီးထွက်ခိုင်းပါတယ်။ rom မှားတင်မိတယ်ဆိုတာ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ သူ့အောက်မှာပါလာတာကတော့ ကိုယ့် rom ရဲ့ anti index ကို သတ်မှတ်ထားပါပဲ။ CURRENT_ANTI_VER=4 လို့အခုတွေ့မှာပါ။ ဒါက သည် rom မှာ anti index4လို့သတ်မှတ်ထားတာပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းထဲက anti index ကို စစ်ပါတယ်။ အဲသည်မှာ fastboot getvar anti ဆိုတဲ့ဟာနဲ့စစ်တာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် ဆက်လုပ်တာကတော့ ဖုန်းကနေဖတ်လိုက်လို့ရလာတဲ့ anti index ဟာ အခု rom အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ anti index ( အခုပုံအရ4ပေါ့ ) ထက် ကြီးနေတယ်ဆို သူက current device antirollback version is greater than this package ဆိုတဲ့ message ကိုပြပြီးထွက်ပါမယ်။ သဘောက anti index5ဖြစ်နေတဲ့ဖုန်းမှာဆို သည်4နဲ့ rom ကို မတင်ဘူးပေါ့။ ဒါ safety check ပဲလေ။ arb ကြောင့် brick တယ်ဆိုတာ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
အပေါ်ပုံက anti index စစ်ဆေးလုပ်သွားခြင်း flow လေးလေ့လာကြည့်ရအောင်ဗျာ။
set CURRENT_ANTI_VER=4 က အခုတင်မယ့် rom ရဲ့ anti index ပါ။ အဲဒါကို သတ်မှတ်ထားတာပါ။
for /f “tokens=2 delims=: ” %%i in (‘fastboot %* getvar anti 2^>^&1 ^| findstr /r /c:”anti:”‘) do (set version=%%i) က fastboot getvar anti ဆိုတဲ့ command နဲ့ anti index ကိုဖုန်းကယူလိုက်တာပါ။ အဲဒါကို version ဆိုတဲ့ variable ထဲသိမ်းထားလိုက်တာပါ။
အကယ်လို့ အထက်မှာဖတ်တဲ့ anti index က ဘာမှမရခဲ့ရင်…ဥပမာ fastboot getvar anti နဲ့စစ်တာ anti : ဆိုပြီးပဲပြတယ်။ ဘာမှမပါဘူးဆိုတာမျိုးတွေလိုပေါ့။ အဲလိုဆိုသူက0လို့သတ်မှတ်ပြီး version ဆိုတဲ့ variable ထဲသိမ်းပါတယ်။ သည်နေရာပါ။ if [%version%] EQU  set version=0
အခုဆို ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ anti index က version ဆိုတဲ့ variable ထဲရှိနေပါပြီ။ 0,1,2,3,4 တစ်ခုခုပေါ့။ အဲသည် version ဆိုတဲ့ variable ထဲကဟာက အခု rom မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ anti index ထက် ကြီးနေသလား။ ကြီးတယ်ဆို firmware မတင်ပါဘူး။ ထွက်ပါတယ်။ ဥပမာ အခု anti index က4လို့ စစ်လိုက်တာရတယ်။ ကိုယ်တင်မယ့် rom မှာ သတ်မှတ်ထားတာ set CURRENT_ANTI_VER=3 ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေရင် မတင်ပါဘူး။ လက်ရှိ anti တန်ဖိုးထက်ငယ်တာတင်ရင် brick ဖြစ်မှာမို့ မတင်တာပါ။ ဖုန်းထဲက anti တန်ဖိုးဟာ အခု rom မှာ set CURRENT_ANTI_VER= နဲ့သတ်မှတ်ထားတာထက် ငယ်နေရင် တူနေရင် တင်ပါမယ်။ ဒါ safe ဖြစ်ပါတယ်။ သည်နေရာမှာစစ်ပြီး ဆက်မလား ထွက်မလား လုပ်တာပါ။ if %version% GTR %CURRENT_ANTI_VER% (echo current device antirollback version is greater than this package exit /B 1)
အခုလို ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ fastboot rom ထဲမှာ anti index နဲ့ပတ်သက်ပြီး စစ်ဆေးလုပ်တာတွေပါနေပြီဆို ကိုယ့်ဖုန်းဟာ ARB protection ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်နေပြီလို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ARB စံနစ်မပါတဲ့ဖုန်းမှာ အဲသည် anti index စစ်ဆေးတာတွေ ဘာမှမပါပါဘူး။ ထိပ်ဆုံးက ဖုန်း codename မှန် မမှန်စစ်မယ်။ မှန်ရင် အောက်ပိုင်းက blocks တွေကိုရေးမယ့် fastboot commands တွေချည်းပါပဲ။
ARB ပါတဲ့ဖုန်းတွေမှာ img file တွေကို fastboot command နဲ့တိုက်ရိုက်မသွင်းနိုင်ပါဘူး။ မိတ်ဆွေတို့ သတိထားမိမှာပါ။ fastboot flash recovery <twrp filename> နဲ့ TWRP သွင်းတာလေ။ Reboot လိုက်ရင် ပျောက်သွားလို့ TWRP ထဲကို fastboot boot နဲ့ boot… ပြီးမှ TWRP ထဲကနေ TWRP img ကို flash ပေးတာ။ အတိအကျပြောရရင်တော့ anti :4ဖြစ်နေတာတွေမှာပါ။ အခုအောက်ကပုံလေးကို နမူနာကြည့်ပေါ့။ Redmi Note5ဟာပါပဲ။ ဖုန်းထဲက anti ကလဲ 4, rom မှာ SET ထားတာလဲ 4, သည်တော့ရေးမယ်။ anti :4မို့ တိုက်ရိုက် flash တာမလုပ်ပဲ dummy.img ဆိုတာလေး အရင် flash ပါတယ်။ ပြီးမှ အောက်က fastboot commands တွေသည် သက်ဆိုင်ရာ blocks တွေသွင်းခြင်းပါပဲ။ manual command ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ fastboot flash antirbpass dummy.img ပါပဲ။ သည်တော့ twrp img လိုမျိုးကို တစ်ခါထဲသွင်းချင်ရင် မိမိဖုန်း fastboot rom ထဲက dummy.img လေးကို ကူးသိမ်းဆောင်ထားပါ။ fastboot flash antirbpass dummy.img လို့တစ်ခါရိုက်သွင်း၊ ပြီးရင် fastboot flash recovery <twrp filename> ရိုက်သွင်း၊ ပြီးရင် fastboot boot <twrp filename> နဲ့ TWRP ထဲကို boot ..ကျန်တာဆက်လုပ်ပေါ့။ အဲလိုဆိုလဲ အဆင်ပြေပါမယ်။
အောက်ကပုံလေးကလည်း Redmi Note5ပါပဲ။ MIUI 9.5 Global Stable ပါ။ Anti :3နဲ့ပါ။ Anti index စစ်တာတွေပါပါတယ်။ Anti :4မဟုတ်သေးလို့ dummy.img အရင်သွင်းပြီးမှ ကျန်တာ flash တာမျိုးမလုပ်သေးပါ။
သည်တော့ဖုန်းက ARB ပါပြီလားဗျ ဆိုရင် လူကြီးမင်းတို့ဖုန်းရဲ့ fastboot rom ကို ဖြည်ပြီး flash_all.bat မှာကြည့်လိုက်ပါ။ Anti နဲ့ပတ်သက်လို့ စစ်တာဆေးတာတွေပါနေတယ်ဆိုရင် arb ပါတဲ့ဖုန်းလို့ပဲသတ်မှတ်နိုင်ပါပြီ။ fastboot getvar anti နဲ့စစ်ရင် anti: , anti : 1, anti : 2, anti :3စတာတွေပြရင်တော့ Downgrade ဖို့ safe ဆဲပေါ့။ Anti :4ဆိုရင်တော့ မဆင်းနဲ့တော့ပေါ့။ အဲလိုမှတ်ယူလို့ရပါတယ်။ fastboot getvar anti နဲ့စစ်မရတာတွေရှိတယ်ဆိုတာ အောက်ပိုင်းက အခြားဖုန်း fastboot rom လေးတွေ ဆက်လေ့လာရင်းကြည့်ရအောင်….။
သည်အောက်ကပုံလေးကတော့ Mi Max3MIUI 10 Global Stable 10.0.1.0 fastboot rom ထဲကပါ။ သူကတော့ တစ်ခါတည်း rom ရဲ့ anti index ကို4တန်းထားပြီး fastboot oem set_anti_var ဆိုတဲ့ command နဲ့ တစ်ခါတည်း တန်းရေးပစ်ထားပါတယ်။ သည်တော့ anti :4ပေါ့။ အနေအထားကြည့်ရတာ သည်ဖုန်းက ARB ပါမယ်။ Redmi Note5လို 1,2,3 တွေမလာပဲ တစ်ခါတည်း4လုပ်ထားတဲ့ပုံစံပါပဲ။ နောက် MIUI Update မှာတော့ စစ်ဆေးပြီးမှ ရေးမယ် မရေးဘူးတွေ ပါချင်ပါလာမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုက စစချင်း ARB ထည့်တယ်။ ထည့်ကတည်းက ပြန်ဆင်းခွင့်မပြု4တန်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလိုပါပဲ။
Mi Max3မှာ သည် rom version ကိုတင်ပြီးရင်တော့ ( China rom မှာဆိုလဲ သူ့သက်ဆိုင်ရာပေါ့ ) fastboot getvar anti နဲ့စစ်ကြည့်ပါ။ သို့မဟုတ် fastboot getvar all နဲ့စစ်ကြည့်ပြီး anti ဆိုတာ လိုက်ရှာကြည့်ကြည့်ပေါ့။ သည် rom မှာတော့ ခုဟာမှာမှ fastboot oem နဲ့ SET လုပ်လိုက်တာဆိုတော့ ဒါတင်ပြီးမှ ရှာလို့ရချင်ရပါလိမ့်မယ်။ Anti စစ်တာ FAILED ပြနေတာက ကိုယ့်ဖုန်း bootloader မှာ Anti နဲ့ပတ်သက်တာ ဘာ info မှမရှိသေး၊ variable မရှိသေးလို့ Variable not found ဆိုပြီး FAILED ပြတာပါ။ နောက် Version တွေမှာ သည်လို flash_all ထဲကြည့်ကြည့်ရင် ဘယ် getvar ကိုသုံးပြီး စစ်တယ်ဆိုတာတွေ ပါချင်ပါလာပါမယ်။ ဒါကိုယ့်ဖုန်းအတွက် စစ်တဲ့ command လို့မှတ်နိုင်ပါတယ်။
သည်အောက်ကဟာကတော့ anti :4ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ Mi 6x ရဲ့ နောက်ဆုံး version China Stable MIUI 10 ပါ။ Redmi Note5သဘောတရားအတိုင်းပဲ။ စစ်ဆေးတာတွေ၊ ရေးတာတွေ လုပ်ပါတယ်။
သည်အောက်ကတစ်ခုကတော့ Redmi6Pro China Stable MIUI 10.0.5.0 ပါ။ ROM ရဲ့ anti index က2ပါ။ anti :2ပေါ့။ စစ်တယ် ရေးတယ်.. အရင် flow ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် anti index စစ်တာ fastboot getvar rollback_ver ဆိုတဲ့ command နဲ့စစ်ပါတယ်။ anti :2မှာပဲရှိနေသေးသော်ငြား fastboot command တွေနဲ့ တိုက်ရိုက် flash တာမလုပ်ပါ။ ဖုန်းက anti :2မှာဖြစ်နေရင် အခြား model တွေမှာ dummy.img ကို အရင်ထည့်ပြီးမှ ကျန်တာရေးသလို သည်မှာက rbv.img ကို ရေးပြီးမှလုပ်ပါတယ်။ သူ့ဖုန်းနဲ့သူ ကွာခြားတတ်တာလေးပါ။ ဒါတွေကို သည်လို fastboot rom တွေထဲမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အောက်ကပုံလေးကတော့ Mi 8 fastboot rom ထဲကပါ။ Anti index SET လုပ်ထားတာပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် anti နဲ့ပတ်သက်တာတွေ ရှေ့မှာ :: လေးနှစ်ခုခံပြီး comment out ထားပါတယ်။ အလုပ်မလုပ်ပါ။ သည်တော့ သာမာန်ရိုးရိုး flash တဲ့ ဖိုင်တစ်ခုပါပဲ။ သည်တော့ သည်ဖုန်းသည်နောင်မှာ ARB ပါလာမယ့်ဟာလို့ ခုလိုပြင်ဆင်ထားတာတွေကြည့်ပြီး မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် Fastboot rom တွေ ဖြည်ကြည့်လေ့လာတာနဲ့ ARB နဲ့ပတ်သက်တာတွေပါနေပြီလားဆိုတာတွေ၊ ဘယ်လိုတွေ အလုပ်လုပ်သွားတယ်ဆိုတာတွေ သဘောပေါက်လောက်ပါပြီ။ ဒါတွေကို TWRP သမားတွေမသိနိုင်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ TWRP ကနေ Flash တဲ့ Recovery rom တွေမှာ Anti Index တွေမပါပါဘူး။ ထို့အတွက်ကြောင့် စစ်ကြည့်လို့မသိပါဘူး။ မသိတဲ့အတွက် အမြင့်တင်ကြည့်တယ်။ မကြိုက်ဘူးဆိုပြီး အနိမ့်ပြန်တင်တယ်.. ဒါမှမဟုတ်.. အရင် TWRP ကနေ backup ယူထားတာ ပြန်ထည့်တယ်။ အကုန်ရတယ်။ ပြီးတော့ dead တာပါပဲ။
Boot Loader Unlock လုပ်ထားပြီး fastboot rom တင်မယ်ဆို အခုလို စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ပြီးသေချာမှတင်ပေးလို့ မိမိက မသိပဲ နိမ့်တာဒေါင်းတင်မိတောင် တင်မပေးတော့ပါဘူး။ တကယ်တော့ Xiaomi က ROM တင်တာကို Official support ပေးတာ Updater ကနေ တင်တာနဲ့ Fastboot rom ကို Mi Flash Tool ကနေ Flash တာပါ။ Mi Flash tool ကနေ တင်တာမှာလဲ Boot Loader Lock ဖုန်းဆို Unlock လုပ်ပြီးမှ တင်တာပါ။ EDL or 9008 ကနေတင်တာသည် Official တင်နည်းလို့ပြောထားတဲ့ထဲမပါပါ။ EDL or 9008 ကနေတင်တာကလည်း flash_all.bat ကစစ်သလိုအဆင့်တွေမပါပါ။ သူက rawprogram0.xml file ထဲက block တွေရေးဖို့နေရာ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း တင်ပေးသွားတာဖြစ်လို့ လက်ရှိက ဘာတင်ထားတယ်။ ကွန်ပျူတာမှာ တပ်ထားတဲ့ဖုန်းအတွက် သည် rom က မှန်ရဲ့လားတွေ မစစ်ပါဘူး။ ဖုန်းထဲက လက်ရှိ anti ထက်နိမ့်တာတင်မိရင်… ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် rom မဟုတ်တာကို တင်မိရင် dead တာပါပဲ။
Recovery ROMs & ARB
ဘာမှလဲ မကလိဘူး။ ဘာမှလဲမလုပ်ဘူး။ Updater ကနေ Update လုပ်လုပ်သွားရင်းလဲ Anti index နောက်ဆုံးထိတက်သွားတာပါပဲ။ Updater ကနေတင်တင်သွားတာတွေက Recovery ROM အမျိုးအစားတွေပါ။ ARB နဲ့ပတ်သက်တာတွေ ပါနေတာက Recovery ROM ကိုဖြည်ကြည့်ရင် firmware-update ဆိုတာ Folder ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေအကုန်လုံး fastboot rom ထဲမှာလဲ ပါတာပါပဲ။ အောက်ကပုံလေးအတိုင်းပါ။
XDA မှာဖတ်ရင် ကိုယ့်ဖုန်းက anti index4တော့ဖြစ်နေပြီ။ အရင် anti index နိမ့်တာတစ်ခုကိုပြန်တင်ရင် ဘယ်လိုပြင်ပါ။ Custom MIUI ROM တွေမှာဆိုရင်လဲ ဒါကတော့ ARB နဲ့ပတ်သက်တာ မပါတာတွေလုပ်ထားတဲ့အတွက် စိတ်ချစွာတင်နိုင်ပါတယ်.. စတာတွေကို ဖတ်မိကြမှာပါ။ အဲဒါသည် အခုပြထားတဲ့ Recovery rom ထဲက firmware-update ဆိုတဲ့ folder ကို ဖယ်ထုတ်ထားပါ။ ဒါဆိုရင် rom ထဲမှာ system, boot ပဲအဓိကကျန်ပါတယ်။ system ကဖုန်းတက်သွားရင် တကယ်အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ boot ကတော့ စတင် boot တက်ဖို့သုံးတာပေါ့။
MIUI base မဟုတ်တဲ့ custom rom တွေမှာတော့ သည် ARB ကို သိပ်စဉ်းစားစရာမရှိပါဘူး။ system နဲ့ boot ပါရင် ဘယ် custom rom ပဲဖြစ်ဖြစ်..ကိုယ့်ဖုန်းအတွက်လုပ်ထားတာပါဆိုရင် boot တက်ပါပြီ။ ဘယ် custom rom မှာမဆို system နဲ့ boot ပဲပါတာပါ။ သည် firmware files တွေပါလာတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အစကတည်းက သည် custom rom တင်ချင်ရင် မူရင်း official miui version က ဘယ်လောက်ရှိနေရမယ်လို့ ညွှန်ကြားတတ်တဲ့ custom rom တွေရှိပါတယ်။ ဒါက သူ့ system အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် မူလ version က firmware files တွေရှိပြီးသား ဖြစ်နေအောင်ပါ။
firmware-update မပါရင် arb လွတ်လို့ အဲဒါဖျက်ပြီးတင်တာပေါ့တော့ တိုက်ရိုက်လုပ်မရဘူးပေါ့လေ။ အဲသည် folder အောက်က files တွေကို ရေးတဲ့ commands တွေကို rom ထဲက updater-script မှာ ဖျက်ထားပေးရတာပေါ့။ fastboot rom ထဲမှာဆိုလဲ သူနဲ့ version တူ recovery rom တစ်ခုဒေါင်း၊ firmware-update ထဲဘာတွေပါလဲကြည့်.. အဲဒါတွေကို flash_all.bat ထဲမှာ flash ပေးတဲ့ fastboot flash နဲ့စတာတွေကို ဖျက်ပေါ့။
သည်နေရာမှာ သည် updater-script ဆိုတာလေးကို အနည်းငယ်သိအောင် ဘယ်လိုလေးတွေ ပြင်တယ်ပေါ့ဆိုတာကို ရှင်းပြပေးပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်ဆင်းဖို့ သည်လိုလုပ်လို့တော့ အတိအကျမပြောချင်ပါဘူး။ သိပ်လိုအပ်လွန်းလို့ဆိုရင်တော့လဲ လုပ်ယူပေါ့ခင်ဗျာ။ updater-script ထဲမှ အခြားသော idea လေးများရအောင်ဆိုတာလောက်ပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
နမူနာ Redmi Note5Recovery rom ထဲကဟာနဲ့ပြပါမယ်။ updater-script က ဘယ်မှာရှိလဲဆို rom zip ထဲက META-INF\_com\_google\_android ဆိုတာထဲမှာရှိပါတယ်။ အဲဒါကို ဖြည်ထုတ်ယူပြီး Text Editor တစ်ခုခုနဲ့ပြင်ပေါ့။ NotePad++ သည် ကြည့်လို့အကောင်းဆုံးနဲ့၊ ပြင်လို့အလွယ်ဆုံး၊ မူရင်း text format မပျက်တဲ့ Editor တစ်ခုပါပဲ။ အဲဒါသုံးနိုင်ပါတယ်။ ပြင်ပြီးရင် rom zip ထဲက updater-script ကို Delete လုပ်၊ ကိုယ်ပြင်ထားတဲ့ updater-script ကို ADD လုပ်ပေးရင် ရပါပြီ။ WinRAR သုံးရင် လိုတဲ့တစ်ဖိုင်ပဲဆွဲထုတ်၊ ပြင်၊ zip ထဲကဟာဖျက်၊ ပြန် add၊ WinRAR ပိတ်.. ဒါဆိုရပါပြီ။ အကုန်ဖြည်စရာတောင် မလိုအပ်ပါ။ ဘယ် rom ပဲဖြစ်ဖြစ် TWRP ကနေ flash တဲ့ custom rom တွေ၊ Xiaomi မှာဆို Recovery rom တွေဆို အဲသည်လမ်းကြောင်းပါပဲ။ fastboot rom မှာ All Clean တင်ချင်ရင် flash_all.bat file လေးထဲက commands တွေက ထိန်းသွားသလို သည် rom zip တွေမှာလဲ updater-script ထဲကနေပဲ ရေးဖို့တွေ ညွှန်ကြားသွားတယ်လို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အောက်ကပုံလေးအတိုင်း ကြည့်ကြည့်ပေါ့။
ထိပ်ဆုံးတစ်ကြောင်းကတော့ ကိုယ့်ဖုန်းက Redmi Note5ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာစစ်တာပါ။ ဖုန်းရဲ့ codename whyred ဆိုတာ ဟုတ် မဟုတ် စစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် rom မတင်ပါဘူး။ ထွက်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ TWRP rom တင်တဲ့အခါ သည် rom က whyred အတွက် (ဥပမာပါ) ၊ မင်းဖုန်းက အခြား codename တစ်ခုပြပြီး အဲဒါဖြစ်နေတယ်။ တစ်ခါတလေ ဘာ codename မှမပြ.. အဲလို product code မတူလို့ တင်မရပါဆိုပြီး flash မလုပ်တာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒါသည် TWRP ကြောင့်ပါ။ TWRP က ကိုယ့် ဖုန်း product code ကို build.prop ထဲကနေ report မလုပ်ပေးနိုင်လို့ပါ။ ဥပမာ Mi Max မှာ ZCX TWRP ကိုသုံးတယ်။ သည်ဟာရဲ့ မူရင်းက Redmi Note3Pro အတွက်ပါ။ ဒါကို CPU တူလို့ port လုပ်လာတာပါ။ အဲသည် TWRP နဲ့ခုလို ROM တွေ flash ရင် ဖုန်း product က kenzo (RMN3 Pro codename) ဖြစ်နေတယ်၊ တင်မယ့်ဟာက helium (Mi Max Prime codename) ဖြစ်နေတယ်။ မတူဘူး။ မတင်ဘူးဆိုပြီး error ပြထွက်ပါတယ်။ ဒါတွေက TWRP ကြောင့်ပါ။ သည်အတွက်ဘာလုပ်မလဲဆို TWRP ကို ချိန်းတင်ချင်တင်၊ ဒါမှမဟုတ် အခုကိုယ်ဒေါင်းထားတာ တကယ်ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် rom သေချာတယ်ဆို အဲသည် updater-script ထဲမှာ အဲသည် ထိပ်ဆုံးလိုင်း ; ထိကိုဖျက်ဖို့ပါပဲ။ NotePad++ နဲ့ဆို သည် batch command statements တွေကို trace လိုက်လွယ်အောင် ဖော်ပြပေးတတ်တာ programming language အနည်းငယ်နားလည်သူဆို သဘောပေါက်ပါတယ်။ အဲဒါဖျက်ပြီးမှ rom zip ထဲပြန်ထည့်တင်ရင် ခုနလို codename မတူလို့ twrp က မတင်ဘူးဆိုတာတွေ မရှိတော့ဘူးပေါ့။ ကိုယ့်ဖုန်းအတွက်ဟာ မဟုတ်တဲ့ rom ကိုတော့ သည်လို လုပ်ပြီး လုံး၀ လုံး၀ မတင်သင့်ပါပေါ့ခင်ဗျာ.. 😀 ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် မဟုတ်တဲ့ fastboot rom ကို EDL ကနေ ဇွတ်တင်ခိုင်းသလို ပုံစံမျိုးလို ဖြစ်နေပြီးတော့ dead နိုင်ပြီပေါ့ခင်ဗျာ…။
သည်အောက်ကပုံကတော့ firmware-update folder ထဲက files တွေကို ဖုန်းရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ block တွေဆီကို ရေးခိုင်းတာပါ။ အဲသည် line တွေကိုဖျက်တာပါပဲ။ firmware-update folder ကြီးတစ်ခုလုံးဖျက်တယ်ဆို အဲသည် package_extract_file လို့ command ပါတဲ့ဟာထဲမှာ firmware-update လို့ ပါနေရင် အဲသည်လိုင်း ဖျက်တာပါပဲ။ သည် firmware files တွေထဲမှာ NON-HOLS ဆိုတဲ့ဟာက ဖုန်း modem file ပါ။ လိုင်းတက်ဖို့၊ လိုင်းဆွဲအား..စတာတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ အရင် miui ver က အဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေတာရှိရင် သည် version မှာ fix လုပ်ပေးမယ်ပေါ့။ BTFM က Bluetooth, WiFi တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေပါ။ ဒါတွေက ARB နဲ့မဆိုင်လှလို့ ထည့်မယ်ဆို ထည့်လို့ရပါတယ်။ ခုနကပြောခဲ့သလို modem, wifi, bluetooh လောက်တော့ update ဟာဖြစ်ပါစေ။ ထည့်မယ်။ ကျန်တာတော့ ဖျက်မယ်ဆိုရင်တော့ firmware-update folder ထဲက သက်ဆိုင်ရာ files တွေပဲ WinRAR ထဲမှာ Delete လုပ်ပစ်ပေါ့။ updater-script ထဲမှာလဲ modem, wifi, bluetooth တို့ထည့်ပေးမယ့် package_extract_file လိုင်းလောက်ပဲချန်ပြီး ကျန်တာဖျက်ပေါ့။ ကျနော် ပုံမှာနမူနာ လိုင်းဆွဲပြထားတာပါ။ updater-script ထဲရှိ လိုင်းအကုန်ကို လိုက်စစ်ယူရမှာပါ။ package_extract_file ( အစ ) အပိတ် ; အဆုံးထိက file တစ်ခုရေးတာပါ။ အဲလိုမှန်အောင်တော့ စိစစ်ဖျက်ရပါတယ်။ ( ) ; တွေ ပိုဖျက်မိလို့ မရပါဘူး။ package_extract_file သည် fastboot rom ထဲကလိုဆို fastboot flash ဆိုတဲ့ command သဘောပါပဲ။ file တွေကို သက်ဆိုင်ရာ block တွေမှာ ရေးခိုင်းတာပါ။
ဒါဆိုရင် updater-script အကြောင်းနားလည်လောက်ပါပြီ။ ARB ဖယ် firmware လုပ်တယ်ဆိုပြီး Recovery rom, Fastboot rom တွေထဲ လိုက်ပြင်ပြီးလုပ်လို့ မတိုက်တွန်းလိုပါ။ Idea တစ်ခုလောက်ပါ။ ကျနော့်အနေနဲ့လဲ ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် rom မှန်တယ်။ TWRP က codename မှန်မပြလို့ rom တင်မရတာမျုးိပဲ ထိပ်ဆုံးက product code စစ်တဲ့လိုင်းတစ်ခုလောက်ပဲ ဖျက်ပြီး တင်တာမျိုးလောက်သာ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
အခုလောက်ဆို ROM တွေထဲက ARB နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပါတာ၊ သူတို့သဘာဝလေးတွေကို သဘောပေါက်လောက်ပါပြီ။ လေ့လာကြည့်ရင် BLU လုပ်ထားပြီး fastboot rom တွေကို တင်တာသည် safe ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆို သူတို့မှာ Anti index စစ်ပြီး ဖုန်းထဲရှိတာထက် ROM မှာ SET ထားတာက နိမ့်နေရင် တင်မပေးလို့ပါပဲ။ TWRP မှာတော့ ဖုန်း codename မှန်တာနဲ့ ရေးပါဆိုတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဖုန်းကို Official MIUI rom တွေပြန်တင်မယ်ဆို fastboot ကနေ clean တင်တာ safe အဖြစ်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး idea ပဲလို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ anti:4မဖြစ်သေးတဲ့ဟာကနေ anti :4ဖြစ်မှာကိုတင်မယ်ဆိုလဲ TWRP မသုံးသင့်ဆိုတာမျိုးလဲ ဖတ်မိပါသေးတယ်။ fastboot rom တင်တဲ့ဟာမှာ လိုအပ်တာစစ်။ မလိုတာ၊ version အသစ်နဲ့မကိုက်တာဖျက်၊ ပြီးမှတင် ဆိုတဲ့ commands တွေညွှန်ကြားပြီး တင်ပြီးမှ reboot တာလုပ်သွားတာပါ။ Recovery rom တွေထဲမှာက blocks တွေကို ရေးမယ်ဆိုတာတစ်ခုလောက်ပဲပါတာပါ။ သည်တော့ fastboot သည်သာ အကောင်းဆုံး idea ပေါ့ခင်ဗျာ…။
Custom rom တွေတင်မယ်ဆိုရင်တော့ TWRP ပဲသုံးရမှာပေါ့။ သည်တော့ Custom MIUI တွေတင်ရင် အဲသည် rom ဟာ Xiaomi Official ရဲ့ ဘယ် rom ကနေ base ယူလုပ်ထားတာလဲဆိုတာကို စစ်ဆေးပါ။ တော်တော်များများသည် china beta rom ကို base ထားတာများပါတယ်။ Custom MIUI တွေမှာ Version နံပါတ်တပ်တာကိုလဲ Official အတိုင်းပဲသုံးပါတယ်။ beta base ဆိုလဲ 8.12.15 စသည်ဖြင့် (Year.Month.Day format နဲ့) ပေါ့။ Stable version based ဆိုလဲ V10.0.1.0 .. စသည်ဖြင့်.. သည်တော့ ကိုယ့်ဖုန်းမှာ ARB ပါသလား။ အဲသည် Version နံပါတ်တွေမှာ ပါသလား။ ဖုန်းရော rom ရော ပါတာချင်း တူတူဆို OK ပေါ့။ အဲလိုသဘောမှတ်နိုင်ပါတယ်။ အမြဲသုံးလေ့ရှိတဲ့ Custom MIUI တစ်ခုတင်ခါနီး နဲနဲလေ့လာ စစ်ဆေးပြီး တင်သုံးရင်း နောက်ဆက်ဆက်တင်သွားရင် အထာပေါက်သွားမှာပါ။ Official ဆီပြန်သွားချင်ရင်တော့ fastboot ကို အတတ်နိုင်ဆုံးသုံးပေါ့။ အခု anti :4နဲ့ဖြစ်နေပေမယ့် တစ်ချိန်မှာ Official က anti :5ဆိုတာ ရောက်မနေဘူး မပြောနိုင်ဘူးလေ 😀
ARB ကြောင့် dead ပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းက Power on ရင် Mi Logo တောင်မပေါ်တော့ပါဘူး။ ကွန်ပျူတာမှာ ချိတ်ပြီး Device Manger ထဲကြည့်ရင် COM နံပါတ်တစ်ခုနဲ့ QDLoader port တစ်ခုတွေ့မှာပါ။ အဲဒါ EDL or 9008 mode ဝင်နေတာပါ။ သည်တော့ ပြန်လုပ်နည်းက EDL ကနေ Mi Flash tool နဲ့နောက်ဆုံး firmware ပြန်တင်တာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် တင်ချင်သလိုတင်မရတော့ပါဘူး။ ARB ပါတဲ့ ဖုန်းတွေကို EDL or 9008 mode ကနေ firmware တင်ရင် Authorized Mi Account ဆိုပြီး firmware တင်ချိန် Mi Account login ဝင်ခိုင်းပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ့် Mi Account ပါပဲ။ EDL mode ကနေ firmware တင်ခွင့်ရထားတဲ့ Mi Account ပါ။ Redmi Note5တွေမှာ ARB ပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်း BLU ပြီး TWRP တွေနဲ့ ကလိနေသူတွေ dead တာများပါတယ်။ ဒါကို Xiaomi ဖက်ကလဲ သေချာမကြေငြာပဲလုပ်မိတော့ အဲလိုဖြစ်တာတွေမှာ ပြန်တင်နိုင်အောင် ကိုယ့် Mi Account တွေကို Authorized ပေးပါတယ်။ အဲသည်အချိန်က Xiaomi Forum မှာ ကိုယ့် Mi Account ID တွေ Reply မှာရေးပေးထားဖို့ Post တင်ပေးထားပါတယ်။ အခုတော့ မရတော့ပါ။ အချိန်သတ်မှတ်ထားတာ စေ့သွားတာကြာပါပြီ။
ARB ပါတာတွေကို EDL ကနေတင်ရာမှာ Mi Account ဝင်ခိုင်းပါတယ်။ user name / password မှန်လို့ ဝင်လို့ရသော်ငြား တင်ခွင့်မရှိ ( Authorized မဖြစ်ရင် ) ရင် ခုလိုပဲ Login တော့ Success တယ်။ PC နဲ့ ဖုန်း Device ကတော့ bind မဖြစ်ပဲ တင်မရပါဘူး။ အောက်ကပုံလေးအတိုင်းပြပါတယ်။
အောက်ကပုံကတော့ ကိုယ့် Mi Account က EDL or 9008 ကနေ firmware တင်ခွင့်ရှိလို့ ရပြီဆိုတာကို ပြတာပါ။ ပုံမှာကြည့်ရင် Mi 8 China rom MIUI 9.6 ပါ။ အထက်မှာ ကျနော်နမူနာပြတုန်းက Mi 8 Global MIUI 10 နဲ့ပါ။ အဲသည်မှာကတော့ ARB နဲ့ပတ်သက်တာတွေ comment လုပ်ထားဆဲပါ။ အလုပ်မလုပ်သေးဘူးပေါ့။ သည်တော့ Mi 8 China rom မှာ အလုပ်လုပ်နေပြီလား။ နှစ်ခုစလုံးမှာ နောက်ဆုံး MIUI Ver တွေအထိ အလုပ်လုပ်တာတွေမပါသေး၊ ဒါဆို Mi Flash tool က Latest ဖြစ်နေလို့ သည်လိုစစ်တာတွေပါနေတာလား။ သည်လိုစစ်တာတွေ မပါတဲ့ Mi Flash tool version နဲ့ရေးကြည့်ရမလား….. စသည် စသည်ကတော့ မိမိဖာသာ rom ဒေါင်း ဖြည်ကြည့်၊ စစ်ကြည့်၊ Tool ver ပြောင်းစမ်းကြည့်ဆိုတာတွေ လုပ်ကြည့်ရမှာပေါ့။ anti :4ဖြစ်နေတာကတော့ သည်ပုံစံ စမ်းကြည့်လို့ pass ဖြစ်နိုင်ချေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Mi Flash Tool မှာ သူ့ Installation folder ထဲက mi ဆိုတာလေးပါပြီး အောက်မှာ သည်လို file တွေပါရင် EDL တင်တာတွေလုပ်ရင် Authorization တောင်းမယ့် Mi Flash Tool ပါ။ အောက်ကပုံလေးကို ကြည့်ပါ။ ကျနော့်ဟာသည် 2017 12 လပိုင်းကဟာပါ။ ကျနော်ဖတ်မိသလောက် ARB စပါတဲ့ Redmi Note5သည် 2018 မှာမှ စထွက်သလားလို့ပါ။ Mi Flash tool မှာ 2017 အဆုံးလောက်ကဟာမှာ ခုလိုပါနေတာ အစကတည်းက Xiaomi က China to Global fake တွေကို တားချင်တဲ့ idea ရှိပုံရပါတယ်။ Gsmarena ရဲ့ ဖော်ပြချက်ကတော့ Redmi Note5release date က 2018 FEB မှပါ။
Official တင်ခွင့်မရသူတွေအတွက် XDA မှာ နည်းပေးပါတယ်။ firmware folder ထဲက images folder အောက်က firehorse file လို့ခေါ်တဲ့ prog_emmc လို့အစချီတဲ့ file လေးကို အစားထိုးထည့်ပြီး firmware တင်တာပါ။ တင်တာမှာလဲ Mi Flash tool ကို Authorization စစ်တာမပါတဲ့ ဟာကို သုံးကြပါတယ်။ 20174လပိုင်းဟာနဲ့ပြထားပါတယ်။ အချို့ကလည်း သူ့ရှေ့ကထွက်တဲ့ Mi Flash Beta ဆိုတာကိုသုံးကြပါတယ်။ QFIL နဲ့လဲတင်လို့ရပါတယ်။ Redmi Note5အတွက်ပေးထားတာပါ။ ဒါက FIX ARB4 Bricked RN5 (QHSUSB 9008) with MIFLASH/QFIL by devcon69 XDA က firehorse file လေးပေးထားပြီး နည်းရေးပေးထားတာပါ။ ဒါက UNBRICK Your Whyred Without Authorized Account အခြား site တစ်ခုမှာပေးထားတာပါ။ Redmi Note5အတွက်ပါပဲ။ သူကတော့ ROM ကိုပေးထားတာပါ။ အထဲမှာ firehorse file လေးတွေ ပါမှာပေါ့။
အခြားဖုန်းများအတွက်ဆိုလဲ ထိုသို့လေးတွေ ရှာဖွေယူရတော့မှာပေါ့နော်…. 😀 😀 သည်တော့ ကလိတတ်သူအဖို့ အထာလေးတွေသိထားပြီး လေ့လာဖတ်မှတ်နေရင်၊ လောလော လောလောနဲ့ လုပ်လိုက်မယ်ပဲ မလုပ်ရင် နောက်ဆုံးအဆင့်ထိ ဆိုးစရာ မရှိပါဘူး 😀 Authorized Mi Account ကို $ နဲ့ရောင်းကြတာတွေရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလဲ အဲလိုဝယ်ထားသူတွေဖြစ်ဖြစ်.. firehorse file ရှိသူတွေဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကလည်း Team Viewer နဲ့ Remote Service ဆိုပြီး လုပ်ပေးတာတွေတော့ ရှိပါတယ်။
သည်တော့ ARB ဆိုတာကြီးက ကြောက်စရာလဲမဟုတ်ပါဘူး။ Updater နဲ့ Update လေးတင်နေသူတွေအတွက်လဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ Updater ကနေ လက်ရှိတင်ထားတဲ့ Stable version ကနေ Beta version ပြောင်းထားမိရင်လဲ… Beta ဆိုတာ တစ်ပတ်တစ်ခါလို ထွက်နေတော့ ကိုယ်က Stable version ဖက်ပြောင်းချင်ရင် ARB လိုအပြောင်းအလဲတွေကြောင့် Latest Stable ဖြစ်နေတဲ့ဟာမှတောင် အဆင်မပြေဖြစ်မှာစိုးလို့ အခုဆိုရင် Updater app settings ထဲမှာ Stable Update ထွက်ချိန်မှာ ကိုယ့်ကို Stable update ပေးပါလို့ Request လုပ်၊ တောင်းထားလို့ရတဲ့ Option လေးပါပါတယ်။ ဒါဆို Stable rom version update ထွက်ရင် ကိုယ့်မှာလာပြပါတယ်။ ပြောင်းလိုက်လို့ရပါပြီ။ အရင်လို BLU လုပ်၊ ပြိးမှပြောင်းဆိုတာမျိုး မဟုတ်တော့ပါဘူး။ BLU လုပ်၊ ချက်ချင်းပြောင်းဆိုတာ ရပေမယ့် နောက်ဆုံး Stable rom version နဲ့ အခုတစ်ပတ်ပြိးတစ်ပတ်ထွက်နေတဲ့ beta version ကြားကာလမှာ ARB အပြောင်းအလဲတွေကြောင့် ပြောင်းမိရင် အဆင်မပြေဖြစ်တာကို ကာကွယ်ပေးချင်လို့ ခုလိုလေးပေးထားတာပါ။ သည်တော့ မိမိက BLU နဲ့ချက်ချင်းပြောင်းချင်ရင် လက်ရှိ ဖုန်းက anti စစ်၊ Stable version နောက်ဆုံးထဲ anti စစ်၊ တူရင်ပြောင်းပေါ့။ သည်လိုလေးတော့ စစ်ဆေးပေးရတာပေါ့။ သည်တော့ ဘာ rom ပဲဖြစ်ဖြစ် MIUI နဲ့ပတ်သက်လာရင် custom miui ဆိုလဲ သက်ဆိုင်ရာ တင်ပေးတဲ့ forum ထဲမှာ တင်ထားသူတွေ အဆင်ပြေလား Reply တွေဖတ်၊ သူတို့က ဘယ် official miui ver ကနေချိန်းတင်တာလဲ၊ စသည်ဖြင့်တွေ လေ့လာလုပ်ပေါ့ခင်ဗျာ….။ အရင်လို rom zip ဒေါင်း၊ TWRP ကနေ flash ဆိုတာမျိုး ချက်ချင်းတော့ မလုပ်မိစေနဲ့ပေါ့…. 😀 😀 ( ကိုယ်လုပ်နေကြ custom miui မဟုတ်ရင် ပြောပါတယ်.. 😀 ) MIUI base မဟုတ်တဲ့ အခြား custom များကတော့ သူ့ဟာသူ အဆင်ပြေမှာပါ။ မလုပ်ခင် စာဖတ်လေ့လာကြည့်ဖို့လေးတော့ လိုလာမယ်ပေါ့…..။
MIUI Funs များ စိတ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ…. 🙂